Lisitry ny lisitry ny fanentanana fanentanana amin'ny marketing: dingana 10 hahazoana valiny tsara kokoa | Martech Zone
Zoma, Febroary 12, 2021 Zoma, Febroary 12, 2021 Douglas Karr
Rehefa manohy miara-miasa amin'ireo mpanjifa amin'ny fampielezan-kevitr'izy ireo sy ny hetsika ataon'izy ireo aho, dia matetika no hitako fa misy banga amin'ny fampielezan-kevitr'izy ireo manakana azy ireo tsy hahatratra ny fahafaha-mitrandrak'izy ireo. Voka-pikarohana vitsivitsy:
Tsy fisian'ny mazava - Matetika ny mpivarotra dia mifanindry amin'ireo dingana amin'ny dia mividy izay tsy manome mazava sy mifantoka amin'ny tanjon'ny mpanatrika.
Tsy fahampian'ny lalana - Matetika ireo mpivarotra dia manao asa lehibe amin'ny famolavolana fampielezan-kevitra saingy tsy mahita ny singa lehibe indrindra - milaza amin'ny mpihaino izay tokony hataony manaraka.
Ny tsy fisian'ny porofo - fampidirana porofo, fandinihana tranga, hevitra, naoty, fijoroana vavolombelona, ​​fikarohana sns hanohanana ny toeran'ny fampielezan-kevitrao.
Tsy fahampiana fandrefesana - miantoka fa manana fitaovana handrefesana ny dingana tsirairay amin'ny fampielezan-kevitra sy ny valiny ankapobeny.
Tsy fahampian'ny fanandramana - manome sary hafa, lohateny ary lahatsoratra izay mety hanome fiakarana bebe kokoa amin'ny fampielezan-kevitra.
Tsy fahampian'ny fandrindrana - Matetika ny mpivarotra dia manao fampielezan-kevitra amin'ny silo fa tsy mandrindra ireo mpampita vaovao sy fantsona hafa rehetra hampiroboroboana ny fampielezan-kevitra.
Tsy fahampian'ny drafitra - amin'ny ankapobeny… ny olana lehibe indrindra amin'ny ankamaroan'ny fanentanana izay tsy mahomby dia tsotra - tsy fisian'ny drafitra. Arakaraka ny ahaizanao fikarohana sy fandrindrana ny fampielezankevitra ara-barotra anao no hahitana vokatra tsara kokoa.
Izaho dia namolavola fandaharam-pianarana marketing nomerika be fangatahana miaraka amin'ny oniversite isam-paritra mba hanampiana ny orinasa hampihatra ny dingana handresena ireo banga ireo. Miorina amin'ny rafitra novolavolainako ho an'ny mpanjifanay rehetra izay voasoratra an-tsary ao aminay Fitsangatsanganana haingam-barotra.
Miaraka amin'ny dia, tiako ny orinasa sy mpivarotra mba hanana dingana foana rehefa hipetraka handamina izay fandraisana andraikitra rehetra. Niantso ity lisitra fizahana ity aho hoe Lisitry ny lisitry ny fanentanana fanentanana - Tsy voafetra amin'ny fampielezan-kevitra fotsiny izy io, fa momba ny ezaka marketing rehetra ataonao, manomboka amin'ny bitsika iray mankany amin'ny video manazava.
Ny tanjon'ny lisitra fizahana dia tsy ny hanome tetika iray voarakitra an-tsoratra tanteraka. Tahaka ny teknisiana laboratoara mampiasa lisitra fizahana mba hahazoana antoka fa tsy diso dingana iray izy ireo, ny orinasanao dia tokony hampiditra lisitra fanamarinana isaky ny fampielezana na hetsika ara-barotra apetrakao.
Ity ny lisitry ny fanontaniana izay tokony hovaliana rehetra fandraisana andraikitra amin'ny marketing.
Lisitry ny lisitry ny fanentanana fanentanana:
Inona ny mpihaino ho an'ity fampielezana marketing ity? Tsy hoe iza ihany… inona no mampiditra iza, ny persona, ny sehatra misy azy ireo amin'ny dia mividy, ary mieritreritra ny maha-avo kokoa ny fampielezan-kevitrao noho ny fampielezan-kevitr'ireo mpifaninana aminao.
Aiza ny mpanatrika ho an'ity fampielezana marketing ity? Aiza no ipetrahan'ireo mpijery ireo? Inona avy ireo fitaovana sy fantsona tokony hampiasainao hahatratrarana ny mpihaino anao amin'ny fomba mahomby?
Inona no loharano mila atokana ve ity fampielezan-kevitra marketing ity? Eritrereto ny olona, ​​ny fizotrany ary ireo sehatra ilainao hampiasaina hitantanana tsara ny fampielezan-kevitra. Misy fitaovana afaka manampy anao hampitombo ny valiny?
Inona no porofo azonao atao ve ny mampiditra amin'ny fampielezan-kevitrao? Mampiasà tranga, fijoroana vavolombelona an'ny mpanjifa, fanamarinana, tsikera, naoty, fikarohana… inona ny fanamarinana avy amin'ny antoko fahatelo azonao ampidirina handresena olana ara-pitokisana momba ny marika na orinasa hampiavaka anao amin'ny fifaninanana ataonao?
Misy ezaka hafa azonao atao ve mandrindra miaraka amin'ny fanamafisana ny valin'ity hetsika ity? Raha mamorona whitepaper ianao, manana lahatsoratra bilaogy ve ianao, lanja momba ny fifandraisam-bahoaka, lahatsoratra bilaogy voatsonga, fizarana ara-tsosialy, fizarana influencer… inona ny mpampita vaovao sy fantsona hafa azo ampidirina mba hampitomboana ny fiverenanao amin'ny fampiasam-bolanao?
Is the miantso-to-hetsika voalaza mazava? Raha manantena ny handray andraikitra ianao, dia aza hadino ny milaza azy ireo hoe inona no hatao manaraka ary apetraho aminy ny andrasana. Ho fanampin'izay, azonao atao ny mieritreritra CTA hafa raha tsy vonona ny hirotsaka tanteraka izy ireo amin'ity fotoana ity.
Inona avy ireo fomba azonao ampidirina retarget ny mpihaino anao? Mety tsy vonona ny hividy anio ny fanantenanao… azonao atao ve ny mametraka azy ireo amin'ny dia fitaizam-panahy? Ampio amin'ny lisitry ny mailakao izy ireo? Manao fanentanana fandaozana sarety amin'izy ireo? Ny fieritreretana ny fomba ahafahanao mamerina mamerina mamory ny mpihaino anao dia hanampy anao hametraka vahaolana alohan'ny tara loatra.
Ahoana no hataontsika refesina na mahomby ity fandraisana andraikitra ity? Mampiditra pixel mpanara-maso, URL an'ny fampielezan-kevitra, fanaraha-maso ny fanovana, fanaraha-maso ny hetsika… araraoty ny lafiny rehetra amin'ny analytics mba handrefesana tsara ny valiny azonao amin'ny fampielezan-kevitrao mba hahafantaranao ny fanatsarana azy.
Hafiriana mila jerena raha mahomby ity fandraisana andraikitra ity? Impiry no hamerenanao ny fampielezan-kevitrao raha hahomby na tsia, rehefa mety mila mamono azy ianao na mandrafitra endrika azy indray na manatsara azy io mandroso.
Inona no nataonay mianatra avy amin'ity hetsika marketing ity izay azo ampiharina amin'ny manaraka? Manana tranomboky fanentanana voalamina tsara ve ianao ary manome anao torohevitra momba ny fanatsarana ny fanentanana manaraka? Ny fananana tahiry fampahalalam-baovao dia manakiana ny fikambanananao mba hialanao amin'ny fanaovana hadisoana mitovy na hiteraka hevitra fanampiny amin'ny fampielezan-kevitra manaraka.
Ny marketing dia ny fandrefesana, ny fiakarana ary ny fanatsarana hatrany. Valio isaky ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing ireo fanontaniana 10 ireo ary manome toky aho fa hahita vokatra tsara kokoa ianao!
Lisitry ny lisitry ny fanentanana fanentanana
Manantena aho fa ankafizinao ny takelaka rehefa mandroso miaraka amin'ireo hetsika ataonao ianao, avelao aho hahafantatra ny fomba nanampiany anao!
Ampidino ny lisitry ny lisitry ny fanentanana amin'ny fampielezan-kevitra
Tags: mpihainolisitraDownloadmaimaim-poana Download-barotrafanentanana ara-barotralisitry ny fanentanana amin'ny marketinglisitra fanomanana ny fanentanana ho an'ny varotralisitra fanamarinana ara-barotrafandraisana andraikitra amin'ny marketingPDFdownload PDF
Sep 28, 2017 ao amin'ny 5: PM PM
Doug tena tsara - fitaovana lehibe (mba hikapohako sy hamboariko !!)
Mar 1, 2021 amin'ny 4: 44 AM
Tompoko, azafady mba omeo fampianarana momba ny varotra nomerika maimaimpoana?
Mar 1, 2021 amin'ny 11: 10 AM
Salama Sampada, azafady fa tsy manam-potoana na enti-miasa hanaovana izany aho!